Blog Reader: [dawnmanhon(ဒေါင်းမာန်ဟုန်)]6New Entries: အထိန်းသိမ်းခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ခြံဝင်းအတွင်း လွတ်လပ်ရေးနေ့ သီချင်းသံများ ကြားနေရ
[dawnmanhon(ဒေါင်းမာန်ဟုန်)]6New Entries: အထိန်းသိမ်းခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ခြံဝင်းအတွင်း လွတ်လပ်ရေးနေ့ သီချင်းသံများ ကြားနေရ
အထိန်းသိမ်းခံ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ခြံဝင်းအတွင်း လွတ်လပ်ရေးနေ့ သီချင်းသံများ ကြားနေရ
ဒီနေ့ဟာ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ရယ်လို့ အချုပ်အချာ လွပ်လပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်လာတာ ၆၁နှစ်မြောက် ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားတွေကို အစိုးရ ရုံးစိုက်ရာ နေပြည်တော်မှာ နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားနဲ့ ကျင်းပသွားသလိုပဲ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူတွေကလည်း လွတ်လပ်ရေး အခမ်းအနားတွေကို ကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေပေါ်မှာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့ လက်သစ်တွေက ပြည်တွင်းရေး စွပ်ဖက်နေ တယ်လို့ စစ်အစိုးရ ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြနေချိန် အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေကလည်း အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ဆောင်ဖို့ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းသွားပါတယ်။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းကနေ လွတ်လပ်ရေး သီချင်းသံတွေကို လွှင့်ပျံ့နေပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို မအေးအေးမာက ရန်ကုန်က အတိုက်အခံ လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းကို တင်ပြထားပါတယ်။
၆၁နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ် ခြံဝင်းအတွင်းမှာ လွတ်လပ်ရေး သီချင်းသံများ ကျယ်လောင်စွာဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပြပါတယ်။
"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ လွတ်လပ်ရေးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သီချင်းတွေကို အပြင်ကနေ ကောင်းကောင်း ကြားရအောင် ဖွင့်ထားပါတယ်။ နောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုယ်တိုင် မနက် စောစောမှာ နေအိမ်ခြံဝင်းရဲ့ နဖူးစည်းမှာ အ၀တ်အနီပေါ် အ၀ါရောင်စာလုံးနဲ့ ပိုစတာ အသစ်တခု တပ်ပါတယ်။ စာသားကတော့ -
"တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထု အကျိုးကို ရှေးရှု၍ ပြတ်ပြတ်သားသား ဆောင်ရွက်ကြ"
လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီရဲ့ ဗဟိုသာမက တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် တချို့မှာလည်း ပြုလုပ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် အခမ်းအနားမှာတော့ သံတမန်တွေ၊ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားတွေအပါအ၀င် လူအင်အား ၅၀၀ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ လုံခြုံရေး တော်တော် တင်းကျပ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းကို အခုလို ပြောပြပါတယ်။
"လုံခြုံရေးကတော့ တော်တော်များများကို ချထားတာတွေ့ရတယ်။ ရုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ရဲရော၊ အရပ်ဝတ်နဲ့ လူတွေရော အားလုံး ၂၀၀၊ ၃၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ရုံးရဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာဆိုရင် ထောင်ချီပြီးတော့ ရှိတယ်။"
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ လွတ်လပ်ရေး ခေတ်ကာလနဲ့ ဒီနေ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေကို နှိုင်းယှဉ်တဲ့ ကြေညာချက် တခု ထွက်တဲ့ အကြောင်းကိုလည်း အခုလို ပြောပါတယ်။
"နှိုင်းယှဉ်တာက ၄၇မှာ တိုင်းပြုပြည်ပြု လွှတ်တော် ရှိတယ်။ တိုင်းပြု ပြည်ပြုလွှတ်တော်မှာ ပြည်သူလူထု ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံမှုတွေ ရေးဆွဲဖို့ ဖွဲ့စည်းပြီး သူတို့က ရေးတယ်။ နောက် ၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က အတည်ပြုတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး ပြည်သူလူထု ကိုယ်စားလှယ်တွေ ပါဝင်တဲ့ အခုလက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေအခံဥပဒေကို ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပြတယ်။ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက် အားလုံးပါဝင်တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ဒါဟာ အများပြည်သူ ကောင်းကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့ဟာကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြပါတယ်။ "
အလားတူပဲ မကွေးတိုင်းနဲ့ တနင်္သာရီတိုင်းတွေမှာ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအားတွေကို အောင်မြင်စွာ လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ အဖမ်းအဆီးတွေတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်။
generation wave ၏ New Yearလှုပ်ရှားမှု
ပေးပို့သူ။ ။ မင်းရန်နိုင်(GW)
ရန်ကုန်မြို့က ခြောက်ကပ်ကပ် လွတ်လပ်ရေးနေ့
ဖိနပ်ပစ် ဂိမ်း ယန်း ၇ သိန်းဖြင့် လေလံပစ် ရောင်းရ
အီရတ် သတင်းထောက်မှ သမ္မတ ဘုရ်ှကို ဖိနပ်ဖြစ် ပစ်ပေါက် ခြင်းကို အခြေခံထားတဲ့ ဂိမ်းတစ်မျိုးက အွန်လိုင်းမှာ ခေတ်စာနေပြီး အဲဒီထဲက တစ်ခုက ၁၅ရက်နေ့မှ ၄ရက်ကြာ အီးဘေး တွင် လေလံပစ်ပွဲ ကျင်းပရာ ပေါင် ၅၂၁၅ (ယန်း ၇သိန်းခန့်) ဖြစ် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဂိမ်းရေးခဲ့တဲ့သူကို ၁၉ရက်နေ့မှာ ရွိုက်တာ သတင်းဌာနကို ပြော ကြားခဲ့ပါတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား အဲလက်စ် ချူး က ရေးခဲ့တဲ့ အွန်လိုင်ဂိမ်း sockandawe.com ဟာ သထင်းထောက်တွေ့ဆုံပွဲမှာ လာတဲ့ သမ္မတ ဘုရ်ှကို ဖိနပ်ဖြင့် ပစ်ပြီး စက္ကန့်သုံးဆယ်အတွင်း ဘယ်နှစ်ခု ထိလဲ ကို ပြိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ သန်းနဲ့ချီသော လူအများလာ ကြတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခု ဖြစ်သွားကြောင်းလဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဂိမ်းအတွက် ဆာဗာကို ၃ရက်ကြာသာတင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊ တနင်္လာနေ့မှာ အကြံထုတ်၊ အင်္ဂါနေ့မှာ ဆိုဒ်ပေါ်တင်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ နာမည်ကြီး၊ နောက်နေ့မှာ ရောင်းစားခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။
ဂိမ်းရေးသူအဆိုအရ ဝယ်ခဲ့သူဟာ အင်္ဂလန်မှ အင်တာနက် မီဒီယာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂိမ်းမှ ရငွေကို အလုပ်တွင်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://www.dawnmanhon.co.cc/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.
[မိုးလှိုင်ည] 1 New Entry: ပြေးလမ်းပေါ်ကညများ
[MANAW PHYU]2New Entries: သက်ဆုံးတိုင်
[We Fight We Win. -- " More than Media "] 25 New...
[Moon Thet Pan] 1 New Entry: လွတ်လပ်ရေးနေ့ အမှတ်တရ...
[My TLMS]3New Entries: ကန်တော်ကြီး စာအုပ်ဈေးပွဲ...
[pyaephyo@k0ff33 joe] 1 New Entry: ခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်...
["Education for Myanmar Youths"] 1 New Entry: မတော...
[Myo Chit Myanmar | Dedicated for the people of My...
[May Nyane] 1 New Entry: မြသီလာအလွမ်းပြေ(၂၉)
[Thet Htoo's] 1 New Entry: Steve Vai's Bangkok (Fr...
[စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား]5New Entries: ဒေါက်တာ ...
[Mogok Media] 1 New Entry: သခင်သာခင် (သို့) မိုးကု...
[မဗေဒါရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်] 1 New Entry: နှစ်ချုပ်စာ...
[ရင်ထဲကပန်းတစ်ပွင့် (သို့) ရင်ခွင်တံခါးကပေါက်ကွဲသံ...
[fifty viss] 1 New Entry: 10 things I hate about t...
[ပန်ဒိုရာ]2New Entries: ၀ိုင် အတူသောက်ခြင်း
[ဆိုးသွမ်း] 1 New Entry: လွတ်လပ်ခြင်းဟာ အဓွန့်ရှည်...
[Padauk Myay]3New Entries: မြန်မာ့နိုင်ငံရေး သုံ...
[ကျွန်တော့်အိမ်] 1 New Entry: နေတတ်၊ ဖြေတတ်လျှင်ေ...
[Free In Mind]4New Entries: ဆည်းဆာ
[ကြိုးမဲ့စွန်၏ ရင်ဖွင့်သံစဉ်များ] 1 New Entry: ကျွ...
[လ၀န်းလေး] 1 New Entry:
[dawnmanhon(ဒေါင်းမာန်ဟုန်)]6New Entries: အထိန်း...
[ပီတိ] 1 New Entry: လွတ်လပ်ရေးနေ့
[Nine Nine SaNay]3New Entries: ပျော်ရွှင်တာ၊ မပျေ...
[:: My Little World ::]4New Entries: ☺ ဘာလဲ ဘယ်လ...
[ဒီရေ]7New Entries: မလေးရှားမှာ သတိထားစရာ......
[T.M.H] 1 New Entry: Digital Sketch 126
[ko htike's prosaic collection] 1 New Entry: နအဖ သ...
[Htoo Myat] 1 New Entry: Montgomery College.
[MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA] 1 New Entry...
[ညိမ်းညို] 1 New Entry: ချစ်သူ
[NYI LYNN SECK 18+ DEN] 1 New Entry: Diary 04.01.2...
[ဆောင်း]2New Entries: TAG - With IMAGINARY Space...
[စိုင်းခမ်းထွန်း]5New Entries: အကြွင်းများ ကျန်ေ...
[မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတ္တများ] 1 New Entry: Back to w...
[လှုပ်ရှားနေသော မိုးကောင်းကင်] 1 New Entry: ဗမာ့လွတ...
[J] 1 New Entry: Health - Warning Fanta orange jui...
[Chan Myae Oo] 1 New Entry: ? ? ? ? ?
[KyiMayKaung]4New Entries: Keep those beautiful ...
[Better Tomorrow] 1 New Entry: မိနွယ်အကြောင်း တစ်ေ...
[ခင်မင်းဇော်]2New Entries: အန်တီစုရဲ့ လွတ်လပ်ရေး...
[ကြုံဆုံမိသမျှ] 1 New Entry: Spank Me wants to be ...
[ကေ.တီ.အမ်]2New Entries: ပင့်ကူတစ်ကောင်၏ အထုပ္ပတ္တ...
[All Together on A Planet ...] 1 New Entry: မြန်မာ...
[welcome to my site]5New Entries:
[K]3New Entries: ဂါဇာအတွေး
[ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်] 1 New Entry: ရင်မှာတွယ်ငြိသေ...
[ကပ်ပါပေ့ ပီကေရယ်] 1 New Entry: မြှော်လင့် မြော်တေ...